Però: Oram-be sy fihotsahan’ny ranom-potaka tao Cusco · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Desambra 2018 2:55 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, bahasa Indonesia, русский, English
Ny Talata 26 Janoary 2010, taorian'ny orana nandritra ny herinandro sy taorian'ny telo andro nisian'ny rotsak'orana tsy ankijanona dia nambara tao amin'ny faritra ao Cusco, Pero ny hamehana nandritra ny 60 andro , mba hanafainganana ny ezaka fanadiovana sy hanampiana ireo olona an'arivony (mponina ao an-toerana sy mpizahatany) izay voakasiky ny tondra-drano sy ny fihotsahan'ny ranom-potaka.
Saripikan'i Carlos José Rey ao amin'ny Living in Peru ary nahazoana alalana.
Raha mbola aloha loatra aza ny fanombanana amin'ny fomba ofisialy ny habetsaky ny fahavoazana, dia nilaza ny tatitra fa maherin'ny 40 ny fihotsahan'ny atsanga izay tsy nanakana fotsiny ny làlambe maro tao Cusco fa sady nanimba ny tany sy ny tanimboly , trano sy fotodrafitrasa maherin'ny 9.000 ihany koa ary nahatonga fahafatesan'olona miisa telo. Ankoatra izay, efa ho 2. 000 ny mpizaha tany nihitsoka, izay voatery nafindra toerana tamin'ny angidimbin'ny tafika.
Navitrika indrindra ireo mpisera Twitter tao an-toerana nitatitra ny zava-nitranga farany tao anatin'ireo faritra niharan-doza, ary namoaka sary sy lahatsary saika mivantana avokoa nanomboka ny maraina. Ny sasany tamin'ireo mpisera Twitter mavitrika indrindra dia i Marco A. Moscoso @Markopunk , sy @Apu_Rimak , izay samy avy ao amin'ny faritra avokoa ary nandefa sioka nandritra ny tontolo andro, tahaka ireto: avy amin'ny mpisera @markopunk :
Nirodana ny tetezana lehibe tao Pisac. Nitongilana ny tetezana. Tondraka ny voly sy trano.
Izcuchaca, tondradrano tamin'ny trano fonenana sy ny hopitaly. Roa no naratra noho ny fianjeran'ny trano.
Nitatitra ny tranonkalan'i Cusco fa nianjera ny jiro lehibe roa tao Saylla, ary nanakana ny fitobahan'ny rano.
Avy amin'ny mpisera @Apu_Rimak :
Avy amin'ny governemantam-paritra ao Cusco, nanambarana ny hamehana ao amin'ny faritra
Namoaka ny zava-nitranga ihany koa ny bilaogera. Namoaka lahatsary roa i Derik avy amin'ny bilaogy Crío de la Niebla ary nilaza hoe:
Mihoatra noho ny mahazatra ny zavatra mitranga na dia ao anatin'ny fotoanan'ny orana aza isika. Androany, nilaza ny fampahalalam-baovao fa nanambara ny hamehana ny governemanta tao amin'ny faritr'i Apurímac sy Cuxco.
Mbola zava-dehibe hatrany ny mihetsika, ary miaraka amin'izay koa, ny misaintsaina mikasika ny fanomanantsika na tsia amin'ny dingana fiomanana, farafaharatsiny, amin'ny loza iray mety hitranga amin'ny fotoana rehetra.
Ilay mpisera YouTube Multimediantonio no namoaka ireo lahatsary, izay namaritra ny lahatsary ho “tsy nisy olona nitatitra. Azo jerena eto ny fizarana faha-2 .
“Nanjavona tao amin'ny sarin-tany” ara-bakiteny ny distrikan'i Huacarpay any Cusco. Nijanona ho tondraka ny distrika iray manontolo noho ny farihy sy renirano. Olona an'arivony no voakasika, matory eny an-tendrombohitra tsy misy fiarovana ny vahoaka.
Nanoratra i Laura Arroyo ao amin'ny bilaogy Menoscanas hoe:
Nilaza ny filoha, fa nisy ny lesoka tamin'ny fisorohana ireo loza ireo. Eny tokoa, fotoana izao hanakanana ny tsy fahombiazana, satria lafo vidy izany. Hita indray fa tsy ampy ny politikan'ny famaliana eo noho eo. Tsy afaka misoroka ny loza voajanahary maro tsy hihatra amin'i Però isika , saingy afaka misoroka izany tsy ho goavana kokoa.
Azo jerena ao amin'ny tranokala Living in Peru, Stu en Perú, ary KnK Explore ireo loharanom-baovao manan-danja amin'ny teny Anglisy. Ireo tranonkala ireo ihany koa dia misioka matetika momba ny vaovao, @livinginperu, @stuenperu, ary @jkwak.
Nanome fandrakofana pejy manokana momba ny loza ihany koa ny fampitam-baovao, toy ny vaovao avy amin'ny gazety El Comercio sy La República. Tsy nanome vaovao momba ny fihotsahan'ny ranom-potaka tao Cusco fotsiny izy ireo fa tany amin'ny faritr'i Apurímac sy Puno ihany koa. Nifantoka tamin'ireo mpizahatany tafahitsoka tao Machu Picchu sy tao amin'ny Lohasaha Masina ny ezaka famonjena, ary antenaina fa ho tonga any amin'ireo mponina ao an-toerana voakasika sy mitoka-monina izany.
Amin'izao vaovao izao dia maro no manontany tena momba ny tetikady ho an'ny hamehana. Nijaly tamin'ny zava-nitranga tamin'ny El Niño ihany koa ny firenena izay nahitana zavatra maro tsy tafarina. Mbola misy ny fefiloha tokony hamboarina, ny tehezan-tendrombohitra tokony hovolena hazo, ary ireo olona maro tokony hafindra toerana. Na dia eo aza ny fahatongavan'ireo oram-baratra ireo, dia maro ireo olona no manontany tena raha azo atao ny mandray fepetra fisorohana mba tsy hahatonga ny vokadratsiny ho tena henjana .
Nandray anjara tamin'ity lahatsoratra ity i Isabel Guerra .
Nandika teny: Eduardo Ávila